Filter Bags,Filter damba,Vovoka Filter Bag,Needle Filter Fabric,Bag hanivana Fabric,Hanivana Fabric Bag,Filter Bags Fabric,Filter Fabrics Bag,Filter Bag Fabrics,Filter Fabric Bags | Polyester Filter Bag Fabric,PP Filter Bag Fabric,Nylon Filter Bag/Sock Mesh,PES Filter Mesh Cloth
Filter Bags,Filter BagsReviewed by Sivanina Cox Bag on 2011-04-27Rating: 4.8Quality Filter Bags supply by COX Filter BagFilter Bags, Best Filter Bags supply by COX Filter with best price.
COX Filter Bag Fabric > 10 Sivanina Micron Bag > Filter Bags -
Filter kitapo dia tena mpanamboatra ny karazana lamba voatenona sy ny fanjaitra tsapan'ny sivana lamba. Dia manorata any Cox Sivanina Lamba ho an'ny antsipirihany vaovao toy ny polyester(PET,PE,PES), PP, Lamba voatenona PA. Rehefa nahatsapa ny fanjaitra sivana lamba, dia hahazo ny tsipiriany avy tsindrio ny ankavia fitaovana.
Filter bag avela tatatra sy maina rehefa mandeha ny fotoana ho mora ampiasaina. Filter kitapo no mampirisika avy amin'ny fantsona tranom-borona, ary mahery palitao miaraka amin'ny rivotra nozzle ho an'ny famokarana fiaramanidina mifanohitra rivotra nipoaka ny inflate ny kitapo eo no ho eo, ary mahatonga azy io ho triatra hiala ao an-tranom-borona ho an'ny dislodging voangony solids avy amin'ny haino aman-jery sivana.
Filter kitapo ny sivana amin'ny alalan'ny ranolava ny metered fisaka rivotra, ampidiro amin'ny alalan'ny Venturi tranom-borona. Control ny mafy ny rivotra sy ny boky dia atao amin'ny alalan'ny hanao zavatra haingana, mpanamory niasan'ny diaphragm valves. Izany dia hiteraka tsy tonga lafatra ny asa fanadiovana.
Filter bag Tsy famerana raha ny amin'ny habeny sy ny endriky ny Filter kitapo. Tsara koa izy ireo ho an'ny orinasa, tany sy ny tanana Mpitroka ny loto ao.
Needle Filter kitapo ny fanamboarana tokony manamboatra sy gasketed toerana mafy ho any amin'ny tarika anatn'ny, corded Cuff, na clamp mba hahazoana antoka ny vovoka mafy tombo-kase. Liquied Filter kitapo no voaisy tombo-kase ny hafanana, manala ny azo atao mahamenatra kofehy. Izany fiantraikany ao amin'ny ranon-javatra Filter kitapo amin'ny mateza fampisehoana ho an'ny nitaky ezaka lehibe indrindra fampiharana.
Welded fanorenana Filter kitapo hisolo tena ny orinasa filamatra amin'ny sivana fanorenana. Misy amin'ny polyester sy ny sivana polypropylene fitaovana, ranon-javatra rehetra Filter kitapo afaka hanery actuated peratra tombo-kase.
Filter Bags Tags : Hanivana Fabric Bag, Filter damba
Acrylic Filter damba »